Saint John Vianney, Saint nke ụbọchị maka ụbọchị nke anọ | Ilblogdellafede
Saint John Vianney, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 4
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 4, 2020 Ọgọstụ 5, 2020
(Mee 8, 1786 - Ọgọst 4, 1859)
Akụkọ banyere St John Vianney
Nwoke nwere ọhụụ na-emeri ihe mgbochi ma na-eme ihe ndị yiri ka ọ gaghị ekwe omume. John Vianney bụ nwoke nwere ọhụụ: ọ chọrọ ịbụ ụkọchukwu. Mana o meriri agụmakwụkwọ ya na-ezighi ezi, nke kwadebere ya nke ọma maka ọmụmụ seminarị.
Enweghi ike ịghọta ihe mmụta Latin mere ka ọ kwụsịtụ. Ma ọhụhụ ọhụụ ịbụ onye ụkọchukwu kpaliri ya ịchọ onye nkuzi nzuzo. Ka John na akwụkwọ ndị ahụ lisịrị ogologo oge, edokwasị ya.
Ọnọdụ ndị na-akpọ maka omume "agaghị ekwe omume" soro ya ebe niile. Dị ka onye pastọ nke ụka parish, John zutere ndị enweghị mmasị na ezigbo ntụsara ahụ obibi ndụ ha. Ọhụụ ya duuru ya gafee nnukwu ibu ọnụ na ụra abalị.
Ya na Catherine Lassagne na Benedicta Lardet, o guzobere La Providence, ụlọ maka ụmụ agbọghọ. Naanị nwoke nwere ọhụụ nwere ike inwe ntụkwasị obi dị otú ahụ na Chineke ga-egbo mkpa ime mmụọ na nke anụ ahụ nke ndị niile bịara Providence ụlọ ha.
Ọrụ ya dị ka onye nkwupụta bụ ihe ọhụụ John Vianney rụpụtara. N’oge oyi, ọ ga na-anọdụ elekere iri na otu n’abali iri na otu n’afọ iji mee ka ya na Chineke dị n’udo. Ewezuga na mmadụ raara onwe ya nye ọhụụ banyere ọrụ ụkọchukwu, ọ garaghị anagide onyinye nke onwe ya ụbọchị na ụbọchị.
Ọtụtụ mmadụ enweghị ike ichere ịla ezumike nká ma were ya nfe, na-eme ihe ndị ịchọrọ ịme oge niile ma enweghị oge. Mana John Vianney anaghị eche echiche banyere ezumike nka. Ka aha ya na-agbasa, ekwuru otutu oge n’ozi ndi Oma.Otutu oge ole o jiri hiri ura ka ekwensu nemegide ahu.
Ma-ọbụ onye nwere ike ịga n’ihu n’ihu na-abawanye ike? N’afọ 1929, Poopu Pius nke Iri họpụtara ya ịbụ onye ụkọchukwu parish site n’ụwa niile.
Enweghị mmasị na okpukpe, yana ịhụnanya nke nkasi obi anụ ahụ, yiri ka ọ bụ ihe ama ama nke oge anyị. Onye si na mbara ụwa ọzọ nke na-ele anyị agaghị ele anyị anya dị ka ndị njem ala nsọ, na -aga ebe ọzọ. N'aka nke ọzọ, John Vianney bụ nwoke na-aga njem, ebumnuche ya dị ya n'ihu na oge niile.
← Na post gara aga Gara aga post:Nkuranhyɛsɛm a ɛtete saa: bere a ɛsɛ mu
Ọzọ Post → Post ozo:Anya mmiri nke Madonna n’ụlọ Bettina Jamundo